Unqulo & Umoya Imikhosi & Imikhosi
UBabon lixesha apho amaPagini amaninzi ebhiyozela inxalenye yesibini yokuvuna. Eli Sabbat li malunga nokulinganisela phakathi kokukhanya kunye nomnyama, ngokulinganayo kwemini nobusuku. Zama ezinye okanye zonke ezi ngcamango - ngokucacileyo, indawo ingaba yinto ekhuselekileyo kwabanye, kodwa sebenzisa iiphi iifowuni kuwe.
Amagqabi sele aqale ukutshintsha, ngoko ubonakalisa imibala ekwindla kwizibingelelo zakho zesibingelelo .
Sebenzisa ii-yellow, ii-oranges, i-reds kunye ne-browns. Gubungela isibingelelo sakho ngeengubo ezifuzisela ixesha lokuvuna, okanye uhambe inyathelo elongezelelekileyo kwaye ufake amaqabunga ahlekileyo anemibala ebusweni bomsebenzi wakho. Sebenzisa amakhandlela kwizinto ezinzulu, imibala ecebileyo-i-reds, igolide, okanye ezinye i-shades ekwindla zigqibelele ngeli xesha lonyaka.
UBabon lixesha lokuvuna kwesibili , kunye nokufa kweendawo. Sebenzisa ingqolowa , izitya zeengqolowa, isikwashi kunye nemifuno engcambu kwisibingelelo sakho. Yongeza ezinye izixhobo zezolimo xa unayo - ama-scythes, izigulane kunye neebhasikiki.
Khumbula, ii-equinoxes ubusuku bobabini bonyaka xa isixa sokukhanya nobumnyama sisilingana. Ukubhabhisa isibingelelo sakho ukufanekisela umbandela wonyaka. Zama isilinganiselo esincinane sesilinganiselo, uphawu lwe-Yin-yang, ikhandlela elimhlophe elihlanganiswe nomntu omnyama-zonke zizinto ezimelela umlinganiselo wokulinganisela.
Ezinye iimpawu zeBabon
Iwayini, imidiliya kunye neidiya
Iipulo , i-cider, nejusi ye-apula
Imifuno yasekwindla yentshukumo ye-autumn, njenge-squashes and gourds
Imbewu, iifowuni zembewu, iinqatha kwiibhokhwe zazo
Iibhasikidi, ezibonisa ukuqokelela izityalo
Isiteyimu sezonkulunkulu ezifanekisela ukutshintsha kwexesha
Ngakumbi malunga neBabon
Unomdla ekufundeni ngamanye amasiko emva kwemibhiyozo yasekwindla equinox?
Fumana isizathu sokuba iBabon ibaluleke, funda ngomxholo wePerphone kunye noDemeter, umqondiso wee-stags, i-acorns kunye nama-oki, kwaye uhlolisise umlingo weepile kunye nokunye!
Imvelaphi yeLizwi iBabon
Ukubuza apho igama elithi "Mabon" livela khona? Ngaba yayingunkulunkulu waseCeltic? Iqhawe laseWels? Ngaba itholakala kwimibhalo yamandulo? Makhe sijonge ezinye zembali emva kwegama.
5 iindlela zokubhiyozela iBabon kunye nezingane
UBabon uwela ngoSeptemba 21 enyakatho yelizwe, kwaye ngo-Matshi 21 ngaphantsi kwe-equator. Le yintlambo yekwindla, lixesha lokubhiyozela ixesha lokuvuna kwesibili. Ixesha lokulinganisela, iiyure ezilinganayo zokukhanya kunye nomnyama, kunye nesikhumbuzo sokuthi isimo sezulu esibanda kakhulu asikude. Ukuba unabantwana ekhaya, zama ukugubha iBabon kunye nezinye zeengcamango ezinobungane kunye neentsapho.
I-Autumn Equinox Ehlabathini
KwiBabon, ixesha le -autino equinox , kukho iiyure ezilinganayo zokukhanya kunye nomnyama. Lixesha lokulinganisela, kwaye ngelixa ihlobo liphela, ubusika sele sisondela. Eli lixesha apho abalimi bevuna ukuwa kwabo, izitiya ziqala ukufa, kwaye umhlaba uqala ukupholisa usuku ngalunye. Makhe sijonge ezinye zeendlela ezikhethiweyo zeeholide yokuvuna emhlabeni jikelele ngeenkulungwane.
Ukuqhawula ukuthuka okanye iHex
Indlela Yokugcina Isibambiso
Isiseko sokuQala kwi-New Seeker
Imithandazo yeNja yokuPhuza
Ukukhangela Umntu Ophefumulayo? Iingcaphuno Ngokufumana Uthando